Turinabol (Tbol) vovoka (855-19-6) Mpanao sy mpamatsy - Factory
Turinabol dia vokatra azo ampiasaina amin'ny sehatry ny fambolena. Ireo atleta amin'ity sehatra ity dia mandray anjara mavitrika tokoa - saika "manerantany mahery" no holazaintsika - fanatanjahan-tena fampiofanana ary mametraka avo lenta - tanjona "tsy azo ijerena".
Ny tanjon'izy ireo dia ny fanafoanana ny fibobohan-toaka sy ny fampiroboroboana ny vatan'ny tazo miaraka amin'ny fitomboan'ny vatany sy ny vatany.
Turinabol dia iray amin'ireo vokatra malaza indrindra eo amin'ny bodybuilders, satria tahaka ny steroid anabolic mahery dia manamora io fanatontosana io ary mahatonga ny tanjona rehetra azo atao "azo atao".
Rul Turinabol (Tbol) (855-19-6) video
Raw Turinabol (Tbol) vovoka (855-19-6) Description
Ny tavy Turinabol (Tbol) Raw Turinabol (Tbol) dia steroide anabolika izay avy amin'ny testosterone.Raw Turinabol (Tbol), ny fanovana izay mahatonga azy io ho herin'akanjo kely tsy dia kely loatra miaraka amin'ny hery faran'ny androgenic. Ny clostebol acetate dia somary marefo ny anabolika tsy manonona afa-tsy ny fahaiza-manao fanorenana. Ny valiny hita avy amin'ireo mpampiasa an'io zava-mahadomelina io dia mitovy amin'ny hita amin'ny fitondrana ny endriny voalohany amin'ny primobolan, na dia tsy dia matanjaka loatra aza izy io.
Ny acostate clostebol dia tsy mivadika amin'ny estrogen ary ny antony mahatonga ny estrogenika, toy ny fihenan'ny rano sy ny gyno, dia tsy zava-dehibe ary ny mpampiasa dia tsy tokony hiahiahy amin'ny fanafody anti-estrogen toy ny arimidex na aromasina. Ny acostate clostebol dia manana toetra matanjaka kokoa androgenic; Noho izany dia azo atao ny androgenic effects rehefa ampiasaina ity steroid ity amin'ny dose ambony. Ny androgenic side effects dia mety ahitana zavatra toy ny hoditra hoditra, akne, ary ny fitomboan'ny fitomboan'ny vatana sy ny vatana. satria tsy misy asa atao etrogenic, fa moderana androgenic, ny mpampiasa io vondrona io dia afaka manantena ny hozatra nahazo ny hatsaran'ny hatsembohana azy. Noho izany, ny acetate clostebol dia hampiasa mpanao biriky manakaiky ny fampisehoana, na amin'ny atleta amin'ny haavo na ny lanjan'ny fanatanjahantena.
Raw Turinabol (Tbol) vovoka (855-19-6) Specifications
Product Name Roila Turinabol (Tbol)
Anarana simika Clostebol acetate; 855-19-6;
Brand Name Steroid ester
MDL Number MFCD00079075
CAS Number 855-19-6
molekiolan'ny Formula C21H29ClO3
molekiolan'ny Wvalo 364.91 g / mol
Monoisotopic Mass 364.181 g / mol
mitsonika Point 227.0 mankany 231.0 deg-C
voafaritra tsara 108 sy le 119 deg
Application Ny Rohdy Turinabol (Tbol) dia steroide anabolic izay endrin'ny testosterone
Inona moa ny poety Raw Turinabol (Tbol) (855-19-6)?
Turinabol dia fiomanana amin'ny steroid anabolika, ampiasain'ireo mpandray anjara amin'ny fambolena, ny mpanara-dia sy ny atleta amin'io fanatanjahan-tena manokana io dia mampitombo ny fiasana "mahery noho ny olombelona", anisan'izany ny fanatanjahan-tena lehibe mba hahatratrarana ny tanjona ambony.
Ny ankamaroan'izy ireo dia mihevitra ny hanafoana ny tavy ary hampivelatra ny tazomoka, ka mitombo be ny lanjan'ny vatana sy ny tady.
Turinabol dia anisan'ireo tolotra ambony indrindra amin'ny fanirian'ny bodybuilders satria heverina ho vokatra mahery vaika amin'ny steroidal anabolika, mahatonga ny fiofanana ho tena mora ary ny tsy azo tanterahina rehetra ho azo tanterahina.
Ahoana ny Rohdy Turinabol (Tbol) (855-19-6) asa
Turinabol (2446-23-3) dia misy fiantraikany tsara amin'ny fitehirizana sy ny proteinina ary ny fampiroboroboana ny famokarana sela mena ao amin'ny vatanao. Etsy ankilany, ireo sela mena izay tompon'andraikitra amin'ny fanomezana ny vatanao amin'ny oksizenina amin'ny alalan'ny ranao. Arakaraky ny habetsahan'ny ra ao amin'ny vatanao ny steadier dia ny famokarana oksizenina sy ny sakafo ho an'ny faritra samihafa amin'ny vatan'ny fanamafisana ny fihenan'ny muscle. Ireo asa rehetra ireo dia ilaina amin'ny vatanao rehefa manatsara ny fihenan-tsak'izy ireo izy ireo ary mampitombo ny fitomboan'ny tavy. Izany no antony mahatonga ireo atleta maro ho tian'ny Oral Turinabol amin'ny steroids hafa anabolic hafa.
Roila Turinabol (Tbol) (855-19-6) Dosage
Tahaka ny vokatra steroid rehetra, toy izany koa Turinabol, dia tokony horaisina mandritra ny fe-potoana.
Noho izany, tokony arahina ny fe-potoana sy ny fe-potoana fitsabahana amin'ny vokatra.
Ny tsindrona mahazatra nentin'i Turinabol dia matetika momba ny 30 mg isan'andro ho an'ny 1 hatramin'ny herinandro 12.
Roila Turinabol (Tbol) (855-19-6) soa
Ny turinabol steroideo anabolika dia ampiasain'ny bodybuilders mandritra ny fotoana fanapahana.
Ny tombontsoa lehibe amin'ny fampiofanana dia ireto manaraka ireto:
manatsara ny fahombiazany
mampitombo ny fiaretana
mampatanjaka ny fatiantoka
miaro ny tazomoka
dia mahomby kokoa ny fotoana fanarenana
fanatsarana ny mozika ny marary noho ny fihenan'ny SHBG
Buy Turinabol (Tbol) vovoka avy amin'ny Buyaas.com
Rojo fanenan-tsoavaly testosteron (315-37-7)